कुन देशबाट नेपालीले कति रेमिट्यान्स स्वदेश पठाउँछन् ? - Ekata News
कुन देशबाट नेपालीले कति रेमिट्यान्स स्वदेश पठाउँछन् ?
काठमाडौं – नेपालको अर्थतन्त्र दिनानुदिन रेमिट्यान्समूखी बन्दै गएको छ । बैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरुले पठाएको पैसाले देशको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६ खर्ब ९५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स देश भित्रिएको छ । जबकी गत आर्थिक वर्षको सरकारको बजेट १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको थियो ।
गत वर्षको तथ्यांक हेर्दा देशको कूल बजेटको करिब ६० प्रतिशत रकम रेमिट्यान्सबाट प्राप्त भएको देखिन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको भूमिका कति छ भन्ने प्रष्ट पार्छ ।
केही वर्ष अघिसम्म नेपालमा मलेसियाबाट सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्रिन्थ्यो । पछिल्ला केही वर्ष मलेसियालाई साउदी अरबले उछिनेको थियो ।
त्यस्तै, ६२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स पठाउँदै जापान नेपालको रेमिट्यान्समा योगदान गर्ने पाँचौं देश बनेको छ ।
जापानले पठाएको सो रेमिट्यान्स कूल रेमिट्यान्सको ९ प्रतिशत हो । जापानमा विद्यार्थी भिजामा गएर काम गर्ने नेपालीहरुले सो रेमिट्यान्स पठाएका हुन् ।
त्यसैगरी, कुबेतबाट ९ अर्ब ८ करोड, बेलायतबाट ६ अर्ब ७४ करोड, अष्ट्रेलियाबाट ६ अर्ब ७२ करोड, कोरियाबाट ५ अर्ब, क्यानडाबाट २ अर्ब ७ करोड, इजरायलबाट ८३ करोड, लेबनानबाट ५७ करोड र अमेरिकालगायतका अन्य देशबाट १ खर्ब ७४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल आएको छ ।
बैदेशिक रोजगार विभागले दिएको जानकारी अनुसार दैनिक करिब १५ सय युवाहरु रोजगारी खोज्दै विदेशिन्छन् । बैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये अधिकांश लेबरमा जाने हुन् ।
यदि यतिनै संख्यामा दक्ष शैक्षिक योग्यता प्राप्त र प्राविधिकहरु विदेशिएका हुन्थे भने देश भित्रिरहेको रेमिट्यान्स अहिलेको भन्दा ३/४ गुणाले बढी हुन्थ्यो ।